Dad-weyne aad u fara badan ayaa ku sii qul-qulaaya Deegaankii dagaaladu ka dhaceen ee Wilaayada Islaamiga ah Baay iyo Bakool. | Halganka Online
Boqolaal ka tirsan dadweynaha ku dhaqan Degmooyinka Xudur iyo Rabdhuure ee Wilaayada Islaamiga ah ee Baay & Bakool ayaa kusii qul-qulaya Deegaanka ” Balliga BK-ka” oo 12km Koonfur kaga began Magaalada ” Yeed” halkaas oo uu maalinkii Arbacada ahayd ee lasoo dhaafay uu ka dhacay dagaal culus oo dhexmaray Ciidamada Wilaayada Islaamiga ah ee Baay & Bakool iyo Maleeshiyo Ridda ah iyo Xabashi is-kaashanayay.
Dadweynaha aadka u faraha badan ee halkaas ku qul-qulaya ayaa u badan rag deegaanka ah oo hubaysan una socda sidii ay ugu biiri lahaayeen Ciidamada Mujaahidiinta ah ee halkaas fariisimaha ku leh, kadib markii ay ka war heleen in Maleeshiyo aad u fara badan oo laga soo daabulayo dhinaca dhulka ay Xabashidu xooga ku haysato ee Soomaali galbeed iyo kuwa kale oo Xabashi ah ay isku urursanayaan Magaalada ” Yeed ” ee ku taalla xad-beenaadka ay Bakool la wadaagto dhulka Xabashidu Gumaysato.
Fariisimaha Ciidamada Mujaahidiinta ee halkaas ku yaalla ayaa waxa sidoo kale buux dhaafiyay Xoolo nool oo ay u keeneen dadka ku dhaqan tuulooyinka iyo baadiyaha ku xeeran Bakool.
Dagaaladii halkaa lagula galey maleeshiyaadkan laga soo abaabuley Itoobiya oo kaashanaaya ciidamo itoobiyaan ah ayaa waxaa ka soo gaarey dagaaladii dhirbaaxo aad u kulul oo aaney filaneyn, kadib markii uu halkaa ku qabsadey dagaal adag bakhti aad u fara badana looga laayey.
Maleeshiyaadkii soo weerar tagay ayaa halkaa waxay ka laabteen iyaga oo quus taagan kadib markii uu batey meydadka looga laayey goobta dagaalka, maleeshiyada Riddada ayaa waxay meesha uga carareen bakhti gaaraya 25 Murtad.
Ciidamada Saliibiga ah ee Itoobiya ayaa waxaa ku dhacey quus lama filaan ah taas oo timi kadib jabkii ku dhacey Maleeshiyaadka ay ururinayeen wax kabadan Sanad oo ay siinaayeen tababaro si ay ula dagaalamaan wilaayaatka Islaamiga ah ee kahana qaadey Koonfurta iyo Bartamaha Somaliya.
« Dagaal ka bilowday Deegaanka ” Balliga BM-ka” ee duleedka Magaalada ” Yeed”. Dhamaan Wilaayaat-ka Islaamiga ah ee Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya oo maanta laga wada Soomanyahay (Warbixin). »